Linux FAQ loharano sy tutorial. Manana baiko mahazatra, scripts, torolàlana an-tariby ary ohatra fametrahana.
Ahoana ny fametrahana Enterprise Puppet amin'ny Red Hat Linux
Tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, nampiseho anao ny fomba hametrahana loharano malalaka Puppet 5 amin'ny Red Hat Linux aho. Androany, hampiseho aminao ny fomba fametrahana Puppet Enterprise aho, izay misy endri-javatra fanampiny, tafiditra ao anatin'izany ny tatitra, ny endriky ny fanodikodinam-pihetseham-pandrenesana, ny fanaraha-maso ny fisehoan-javatra, ny fanaraha-maso ny fidirana fidirana amin'ny fidirana, ary ny fampidirana.
Fanavaozana ny neon KDE - From 16.04 to 18.04
Fanavaozana ny Neon KDE - Avy amin'ny 16.04 ka hatramin'ny 18.04 Updated: November 19, 2018 Ny mpikirakira ny efitrano fandefasana ny Plasma ao an-tokantrano dia ny KDE neon, distro izay tsy aleo fantatra amin'ny anarana hoe distro, miorina amin'ny Ubuntu ary navotsotra tamin'ny Plasma. Hatramin'ny vao haingana, ny rafitra dia nampiasa Ubuntu 16.04 ...
Ahoana ny fametrahana Oracle Java 11 amin'ny Ubuntu 18.04 / 18.10
Ity lesona haingana ity dia mampiseho anao ny fomba mora hametrahana ny Oracle Java 11 LTS farany ao Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04 amin'ny PPA. Misaotra ny ekipa "Fitaratry ny Linux" PPA, misy script-installer afaka maka pake java avy amin'ny Oracle web automatique ...
Ubuntu MATE 18.10 Cosmic Cuttlefish - Azo atao tsara
Ubuntu MATE 18.10 Cosmic Cuttlefish - Azo eritreretina-ish Updated: November 16, 2018 Fotoana hanohizana ny fizahan-toetra fizahan-tany. Ny mpilatsaka an-tsitrapo izay azonay eto dia ny Ubuntu MATE 18.10. Zava-bita mahatalanjona tokoa izany. Izy io dia marika ho toy ny rafitra hoavy maminavina, ary izaho ...
Ubuntu & Deja Dup - Mitsangàna, miverena
Ubuntu & Deja Dup - Mialà, miverimberina Updated: November 2, 2018 Inona no malemy kokoa noho ny lebkuchen? Deja Dup. Raha ny marina dia voatanisa miaraka amin'ny bikana raketam-peo manontolo, ity dia fitaovana tsotra sy azo atao, izay ampidirina ao amin'ny Ubuntu raha alahatra. Amin'ny ankapobeny, manana ny tenako manokana aho ...
TeXstudio 2.12.12 noafahana, Ahoana no fametrahana azy amin'ny ubuntu
Ny famoahana LaTeX mpamorona ny TeXstudio dia namoaka version 2.12.12 androany. Ity ny fomba hametrahana azy ao Ubuntu 18.10, Ubuntu 18.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04. TeXstudio 2.12.12 namoaka hevi-dehibe: hanatsara ny macro, manolotra gui mivantana avy hatrany ny macros avy amin'ny github.com/texstudio-org/texstudio-macro manampy ny fuzzy vita amin'ny mode add cwls fix rare ...
Rasalama $ 25 Pi 3 Modely A + Navoaka - Tolotra feno sy ny vidiny
Ny Raspberry Pi dia solosaina bitika tokana (SBC) novolavolain'ny Raspberry Pi Foundation. Manantena ny hampiroborobo ny fampianarana ny siansa informatika, fandaharanasa ho an'ny ankizy sy any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana. Ny Model Raspberry Pi 3 Model A + vaovao dia tonga amin'ny haavo 1.4GHz, ny tambajotra Wireless 5GHz ...
Ny KDE dia nanjavona tao amin'ny RHEL 7.6 sy ny hoavin'ny RHEL ho avy
Red Hat Enterprise Linux dia fanta-daza amin'ny fametrahana ny maridrefy manerana ny indostria. Ohatra, ny RHEL dia nanosika mafy ny rafitra hany ka ny Linux hafa rehetra dia nanapa-kevitra noho ny antony tsara na ratsy. Red Hat ankehitriny dia nanambara fa ny KDE Plasma Workspaces (KDE) dia nolavina tamin'ny RHEL 7.6 ary ...
Ahoana no fomba fametrahana ny Riak KV Database cluster amin'ny Ubuntu 18.04
Riak dia fizarana daty NoSQL izay manolotra avo-davitra avo lenta, fandeferana diso, fampihetseham-batana ary fampitomboana. Ny Riak dia nosoratana tany Erlang, ary ampahany amin'ny vokatra 'Basho' izay manome karazana hafa, anisan'izany Riak KV (Key value), Riak TS (natokana ho an'ny IoT / Time Series), ary Riak CS (Riak Cloud).
Ahoana ny fametrahana sy fiarovana phpMyAdmin amin'ny Ubuntu 18.04 LTS
phpMyAdmin dia fitaovana maimaimpoana maimaim-poana ho an'ny MySQL sy MariaDB. phpMyAdmin dia fitaovana enti-tranonkala ahafahanao mitantana mora foana ny rakitra MySQL na MariaDB. Azonao atao ny manatanteraka andraikitra eo amin'ny sehatra fitantanana toy ny famoronana, fanitsiana, na fanesorana databases, famandrihan-drakitra momba ny fandraketana sy famoahana ny daty.
1 2 3 4 ... 174 Manaraka
Screen Twitter Performance Apps iPhone Ubuntu 14.04 web browser PDG windows update Plugin SSD bilaogy fitaovana finday vaovao farany famerenana Company Toetoetra 04 Linux Mint Windows Windows 8 loharano misokatra Linux Samsung Galaxy Command OS X USB Plugins Apple Watch rindrambaiko Apache Linux Ubuntu Systems lalao HTTP fitaovana GNOME WordPress YouTube Ubuntu Database Cortana Up " Unité centrale web server bilaogy Support fitaovana Android afa-po Video Windows Phone Samsung command line MySQL famotsorana PPA haino aman-jery sosialy Facebook One ' MAMAKA Server Phone SSH Chrome tahirin-kevitra endri-javatra Ubuntu 16 Rafitra fikirakirana Unix Microsoft HTTPS IP adiresy Firefox fikarohana 10 API ram takelaka fikirakirana Users finday avo lenta 'App nbsp File Microsoft Windows Debian PHP app store Nginx hametraka Ubuntu 14.10 raki-daza CentOS 7 Fitaovana finday fitaovana Malagasy Bible rafitra ubuntu 15.04 SEO paoma fifamoivoizana "PC Windows 10 CentOS lalao HTML taona Time Google toe-tsaina fanamarinana Bing